Kolosiana 2: 1-23
Kolosiana 1 Kolosiana 2 Kolosiana 3
Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy ho Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa,
ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto [mitombo amin'zany] amin'ny fisaorana.
Fa ao amin'ny tenany no itoeran'ny fahafenoan'ny fomban'Andriamantra rehetra;
ary hianareo dia tanteraka ao aminy, sady Izy no Lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra,
ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataon-tànana tamin'ny fanesorana ny tenan'ny nofo, dia tamin'ny famoran'i Kristy;
fa niara-nilevina taminy hianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra, izay nanangana Azy tamin'ny maty.
Ary hianareo, izay efa matin'ny fahadisoana sy ny tsi-fiforan'ny nofonareo, dia novelominy niaraka tamin'i Kristy, rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra;
ary nesoriny tsy ho eo amin'ny tenany [noreseny ka nobaboiny] ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miharihary ny fitondrany ireo toy ny fanaon'izay avy nandresy.
Aza mety hofitahina tsy hahazoanareo ny loka noho ny fanetren-tena haitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely ka mitompo amin'ny zavatra efa [tsy] hitany sady feno fiavonavonana noho ny fisainan'ny nofony
ka tsy mihazona ny Loha; Izy no itomboan'ny tena rehetra, izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny ozatra, araka ny fampitomboan'Andriamanitra.
Ary raha niara-maty tamin'i Kristy hianareo ka efa afaka tamin'ny abidim-pianaran'izao tontolo izao, nahoana no toa mbola velona amin'izao tontolo izao ihany hianareo ka mety hodidiana hoe: